Saldhig Berbera ah iyo Weydiimo La xidhiidha – Wargeyska Waxgarad
Home / Aragti / Saldhig Berbera ah iyo Weydiimo La xidhiidha
© VOA Somali
Rashiid Sheekh Cabdillasahi (Gadhweyne) March 11, 2018	Aragti, Siyaasad 251,631 Views
Waxa la yidhi Soomaaliland iyo Isutagga Imaaraadka Carabta ayaa ku heshiiyey saldhig ay dawladda gadaal ka magacdhabani ka dhisato Berbera. Adduunka maanta way ku badan tahay dawlad saldhig millatari ku leh dal shisheeye oo la yaab ma laha; ma se aha, run ahaan, wax la isku majeerto, faan na hadalkii daa. Ayada oo sidaas ah, hadda ka ma maarmaayo in aan afeef hore dhigto; waayo waxa aynu nahay dad aan si hufan wax isu weydiin aqoon, arrimahooda na uga doodi karin. Hal iyo halcelinteedba, odhashadeennu waxa ay u badantahay ‘qarandumis, qaswade iyo ka wax daran’. Aniga hadda, qof na ii ma eedaysna ee su’aalo arrinka ku saabsan oo igu wareegaya, ayuun baa soo dhigayaa. Haddii aan jawaab i shaafida helo, waa mahad Alle iyo mudanaheed; haddii kale, cid na ugu dudi maayo. Sidaas darteed, waxaan idhi:
Saldhig millatari oo dal kale laga dhistaa waxa uu leeyahay ujeeddo, mar walba, dagaal la xidhiidh leh. Xataa marka nabad lagu doonayo, xoog dagaal baa cid la tusayaa oo nabadda laga ga xasilinayaa. Cid baa la la haddadayaa, ama haddii kale, la maaggan yahay. Dawladda Imaaraadku maxay uga dan leedahay saldhigga Berbera? Ma ayadoo keli ah baa, mise dawlado kale ayaa arrinka wata ama ku la jira? Arrinku Yaman iyo waxa ka socda ayuu u muuqanayaa in uu lug ku leeyahaye ee wax ma la iska weydiiyey? Dagaalka Yamaneed, Reer-Yaman wuu ka shisheeyaa oo xoogag debedda ka ah baa ku hirdamaya ee ma lagu dalandalanayaa? Maxaa se dhib inoo ga iman kara, dheefi ha dambaysee?
Marka laga yimaaddo dawladda dal kale saldhig millatari dhigaynaysa, ta marti gelinaysaa na, haddii aan xoog lagu marinnin, waa in dani uga muuqataa. Danta u mudani ma aha lacag ee waa ayada nabadgelyadeeda. Dawlaha Khaliijka Carbeed oo ay Imaaraadka iyo Sucuudigu ka mid yahiin, waxaa la jooga ciidammo xoog leh oo Maraykan ah; waxay na ugu xisheen ilaalinta nabadgelyadooda oo ay badiba Eraan uga cabsanayaan. Soomaaliland maxay dhinacan kala gashay Imaaraatka? Ma ku jiraa heshiiska qodobka difaaca nabadgelyada Soomaaliland? Mase u diyaar tahay, karti se ma u leedahay dawladda Imaaraatku arrintaas?
Su’aal kale na waa mushkiladda aqoonsi la’aanta Soomaaliland. Dawladda Soomaaliland ilaa hadda, qanuunka dawliga ah, waxay ku tahay dawlad aan jiritaan sharciyeed lahayn. Haddii heshiiskan khilaaf ka yimaado, haya’daha caalamka, sida UM iyo Maxkamadda adduunka, Soomaaliland u ma dacwoon karto. Cidda adduunku u aqoonsan yahay lahaansha Berbera iyo gebiga Soomaaliland ee maantadan, sheegashadeeda sharciga adduunku u bannaynayaa waa Soomaaliya. Dawladda Imaaraadku miyey jebisay xaqiiqadaas? Mise aqoonsi baa looga filayaa Soomaaliland? Marka aynu ognahay in aan dawladda Imaaraadka iyo dawladaha Khaliijku, xilligan ku dhiirranaynin aqoonsiga Soomaaliland, maxay Soomaaliland isku hallaynaysaa ee damaanoqaadaya danaha uu heshiiskan laftiisu siinayo(danahaas oo aanan anigu ilaa hadda waxba ka ogeyn, aanse filayo in ay jiraan)?
Mid kale oo daymadeed mudani waxay tahay: ciidan hubaysan oo shisheeye ah oo la deggan busho sabool ah, dhaqan xumaan badan buu la yimaaddaa, taas oo in badan dunida lagu arkay. Arrinka ma lagu daray raadxumo bulsheed oo saldhigaasi keeni karo iyo sidee looga gaashaantaa?
Bulshadu, marka ay dhisme adag leedahay, hoggnaankeedu dusha kaga ma yimaaddo ee ayadaa gudaheeda ka soo saarta. Hebelka waxaa ka horreeya oo ay, kolkeeda hore ba, isku raacsantahay danta nolosheeda midka ah, wadajirkeeda, qiyamta runta, aammaanada, caddaalada iyo anshaxa dadnnimada wacan. Beegga xulashadeedu taas buu ka yimaada oo hebellada isku ma seegto. Hoggaamiyaha xulashada bulsheed ee dhabta ah ku yimaadaa na qiyamtaas buu xeeriyaa oo doodda hub dagaal kama dhigto; dadka na saamo colaadeed ma horjiido ee dooddiisu waxay xoojisaa wadajirka bushada uu hoggaamiyeheeda yahay, ama rabo in uu noqdo. Madaxda Soomaaliland, marka arrin dhexdooda yimaaddo way kala didiyaan dadka. Miyey u kasaan, mise waa ka aqoon iyo farsamo?! Mooyi.
Previous Maxay tartaa sheeko faneeddu?
Next Tusaalayaasha Qur’aanka